Dhaxal Sugaha Boqortooyada Sacuudiga oo Iiraan ku eedeeyey weerarkii maraakiibta – Radio Daljir
Juunyo 17, 2019 8:32 b 0
Dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed Bin Salmaan (MBS) ayaa ku eedeeyey dowladda Iiraan weerarkii lagu qaaday maraakiibta shidaalka ee xeebha gacanka Cumaan, isagoona sheegay inuu ka laba labayn doonin inuu xaliyo dhibaato kasta oo soowajahda boqortooyada Sacuudiga.
Laba markab ayaa lagu weeraray Khamiistii lasoo dhaafay xeebaha Gacanka Cumaan, iyadoo laga maqlay laba qarax, laba bilood kadib markii weerar lagu qaaday maraakiib kalle oo marayay xeebaha Gacanka Cumaan dekedda ay maamsho Imaaraatka Carabta ee Fujairah, waxaana arrimahan ay sare usii qaadeen xiisadda Mareykanka iyo Iiraan, iyadoona abuurtay baqdin la xiriirta in lagu dagaalo gobolka oo shidaalka ugu badan laga soo saaro.
“Ma doonayno wax dagaal ah oo gobolka ka dhaca… laakiin kama laba labayn doono inaan ka hortagno khatar kasta, oo aan difaacno shacabkeena, madaxbanaanideena iyo iyo sharafta dhulkeena” ayuu MBS u sheegay wargayska Sharq Al-Awsat oo kasoo baxa magaalada London.
MBS ayaa ku eedeeyey Iiraan inmay siin wax tixgelin ah raysal wasaaraha Jabaan Shinze Abe oo dalkiisa laga leeyahay mid ka mid ah maraakiibta la weeraray, isagoona xiligaasi booqasho ku joogay caasimadda Iiraan ee Tehraan.
Iiraan ayaa horay u beenisay inay wax lug ah ku lahayd weerarkii lagu qaaday maraakiibta shidaalka, waxaana ay ku tilmaantay jawaabta Mareykanka mid lagu degdegay oo aan wadan wax cadaymo ah, balse Mareykanka ayaa dhankiisa soo bandhigay muuqaal kusaabsan ciidamo Iiraaniyiin ah oo fujinaya miinooyin ku dhegsanaa maraakiibta la weeraray, taasi oo aan wali cadaymo buuxda loo hayn cidda weerarkaasi fulisay.